काठमाडौं उपत्यकाका ३४७ संक्रमित कहाँ–कहाँ छन् ? - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंः काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमितको संख्या ३४७ पुगेको छ । जसमध्ये काठमाडौंका २३२, ललितपुरमा ७१ र भक्तपुरका ४४ जना रहेका छन् ।
कोरोनाबाट ललितपुरका दुईजना र काठमाडौंका तीनजनाको मृत्यु भइसकेको छ । आइतबार काठमाडौं ५ र ललितपुरमा १ जना थपिएका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंका ३५, भक्तपुरका ८ र ललितपुरका २ जना डिस्चार्ज भएका छन् ।
शनिबार मात्रै काठमाडौंमा ३ जना संक्रमित थपिँदा २ जनाको मृत्यु भएको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा सोमबार ५४ जना, मंगलबार २८ जना, बुधबार २३ जना, बिहीबार ५ जना र शुक्रबार ४२ जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो । उपत्यकाका ७१ ठाउँमा संक्रमित भेटिएका छन् ।
मन्त्रालयअन्तगर्तको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेका अनुसार उपत्यकामा सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा कोरोना देखिएको बताए । उनले कोरोना प्रभावित मुलुकबाट उद्धारका क्रममा स्वदेश फर्किएका व्यक्तिका कारण संक्रमितको संख्या बढेको बताए ।
याे पनि पढ्नुस भारतबाट आएका ६८ जनाको रिपोर्ट आयो
गत जेठ महिनासम्म न्यून सङ्क्रमित् फेला पर्ने काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्ला दिनहरूमा दैनिक रुपमा सङ्क्रमित बढ्दो अवस्थामा छन् । जसमध्ये अधिकांश विदेश तथा बाहिरी जिल्लाबाट आएका छन् । तर सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएर सङ्क्रमण हुनेहरू पनि बढी छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा उपत्यकामा फेला पर्ने सङ्क्रमित अस्प्तालमा भर्ना भएका, विमानस्थल भएर आएका र केही कुनै यात्रा वृत्तान्त नरहेका पनि छन् । तर उपत्यकामा सङक्रमण दर बाहिरको अपेक्षा थोरै पाइएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा सङक्रमण दर शून्य दशमलब पाँच प्रतिशत छ । बाहिर छ प्रतिशत रहेको छ ।
उपत्यका बाहिर महिला सङ्क्रमित करिब दश प्रतिशतको हाराहारीमा रही कम बेसी हुँदै आएको छ । तर काठमाडौं उपत्यकामा सङ्क्रमितमध्ये ४० प्रतिशत महिला छन् । डा. पाण्डेले यसबारे थप अध्ययन भइरहेको बताउँछन् ।
याे पनि पढ्नुस के नेपालमा लकडाउनको शैली परिवर्तन हुनु जरूरी छ ?
डा. पाण्डेले अनुसार २५ गतेपछि काठमाडौं उपत्यकाको १२ स्थानबाट तीन हजार नमूना सङ्कलन गरिएको छ । मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकामा तत्काल पाँच हजार नमूना लिने लक्ष्य राखेको छ ।
हाल उपत्याकामा विभिन्न संक्रम फैलन सक्ने संभावित १० स्थानबाट तीन हजार जनाका स्वाब संकलन गरिएकोमा एक हजार ६२१ जनाको परीक्षणको नतिजा आएको छ । जसमध्ये तीन जनामा सङक्रमणको पुष्टि भएको छ । जुन ०.१८ प्रतिशत हो । जोखिममा रहेका समुदायबाट उक्त नमूना सङ्कलन गरिएको छ । बैंक, वित्तीय संस्थान, बजार–पसल, स्वास्थ्य कार्यकत्र्ता र घनाबस्तीबाट नमूना सङ्कलन गरिएको छ ।
याे पनि पढ्नुस एउटै वडाका ४२ जनामा कोरोना पोजिटिभ
१२ वटा जोखिमस्थलहरूः अस्पताल, तरकारी बजार, फलफूल पसल, चिया पसल, दुग्ध/डेरी, रेस्टुरेन्ट, किराना पसल, बैंक, सरकारी निकाय, सपिङ सेन्टर, सैलुन/ब्युटिपार्लर, सार्वजनिक यातायात ।
काठमाडौं–१० शंखमूलका ६० वर्षीय पुरुष
काठमाडौं गोकर्णेश्वर नगरपालिका–४ का ५४ वर्षीय पुरुष
काठमाडौं नयाँ बानेश्वरका ८५ वर्षीय वृद्ध
ललितपुरको बुङमतीका ५६ वर्षीय पुरुष
ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका– ५ का पुरुष